Uhuru Kenyatta oo weli ku horeeyo doorashad Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Uhuru Kenyatta oo weli ku horeeyo doorashad Kenya
Uhuru Kenyatta oo weli ku horeeyo doorashad Kenya
Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyata ayaa lagu soo waramayaa in weli uu ku horeeyo tirinta codadka la dhiibtay ee doorashadii ka dhacday dalkaasi Kenya ayadoo goobo hor leh codadka la tiriyay ay wararku sheegayaan in Kenyaata uu weli horeeyo.
Dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka Kenya, Raila Odinga ayaa sheegay in hanaanka combuuterada guddigaasi loo dhacay si codadla loogu shubo madaxweyne Uhuru Kenyatta taasi oo ay wax kamajiraan uu ku tilmaamay guddiga doorashadaasi.
Guddiga doorashada ayaa sheegey in natiijooyinka hadda lasoo gudbiyey aysan ahayn kuwa rasmi ah, kuwa rasmigana ay yihiin kuwa ku qoran foomamka gacanta ku qoran ee laga soo gudbin doono goobaha codka laga dhiibtey.
Mr Odinga ayaa saxaafadda u sheegay in natiijada ka soo baxaysa doorashada ay tahay”mid been abuur ah”,sababtoo ah buu yiri lama keenin dikumiintiyo cadaynaya natiijada.
Guddiga doorashada Kenya ayaa waxa ay sheegeen in boqolkiiba 91 Mr Kenyatta uu ku hogaminayo 54.5 boqolkiiba, halka Mr Odinga uu haysto boqolkiiba 44.6.Dad badan ayaa ka cabsi qaba in ay dalka ka dhacaan rabshado la mid ah kuwii ak dhacay 10 sano ka hor.
Kormeerayaasha caalamiga ah ee kusugan dalka Kenya ayaa rajo ka muujinaya in doorashadaasi ay u dhacday qaab cadaalada ah sida uu horey u balanqaaday guddiga doorasho.
Previous articleAgaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo la kulmay Masuuliyiin ka tirsan Switzerland
Next articleWasaaradda Dastuurka oo kulan ku saabsanaa dib u eegista Dastuurka ku qabatay Muqdisho